म कसरी भुक्तान नगरी वेबसाइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्छु?
यदि तपाइँ चाँडै केहि सशुल्क व्यक्तिहरू प्राप्त गर्नुको सट्टा वेबसाइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ - सम्भवतपाईँले पहिले नै राम्रो तरिकाले गठन गर्ने निर्णय लिनुभएको छ।. यसलाई सामना गरौं - लिङ्क व्यापारका लागी आवेदन कहिलेकाहीँ एक धेरै आशाजनक प्रयास हुन सक्छ. वास्तवमा, तथापि, तपाईको वर्तमान रैंकिंग प्रगतिमा अधिक हानिकारक गर्न अधिक संभावनाहरू छन्, बरु यातायात, CTRs, रूपान्तरित, आदि मा कुनै पनि मापदण्ड र लामो समयसम्म बढ्दो लाभ. कुरा यो हो कि गुगल अब केवल गुणस्तर र प्राकृतिक लिङ्क निर्माण रणनीतिहरु लाई पुरस्कार प्रदान गर्न बलियो हुन्छ. यो वेबसाईटको लागि ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न यसको मतलब छ कि तपाईंले केवल प्रासंगिक तेस्रो-पक्ष वेब पृष्ठहरू र ब्लगहरू आकर्षित गर्न केही समय र प्रयास गर्न सही तरिका हुनेछ।. खैर, गुणस्तर र जैविक लिङ्क इमारतको आधुनिक अवधारणा जस्तो सरल र सजिलो हुने जस्तो होइन, उदाहरणका लागि, दुई वा तीन वर्ष पहिले. ती राम्रा पुरानो समयमा लामो समय बितिसकेको थियो.
आजकल, तपाईं सफलतापूर्वक वेबसाइट को लागि सफलतापूर्वक ब्याकलिंक बना सकते हो जब सही व्यावहारिक कार्य योजनाहरु को प्रयोग गरेर, सामान्य एसईओ रणनीति को बनाए राखन को लागी लगातार समीक्षा र तिनीहरूलाई पछि समायोजित. तर त्यहाँ कुनै पनि चिन्ताको आवश्यकता छैन - यहाँ गुणस्तर लिङ्कहरू प्राप्त गर्न प्रयोगयोग्य तरिकाको एक जोडी आउछ. तपाईं यहाँ को आवश्यकता छ केहि समय र प्रयास को निवेश गर्न को लागि - दिइन्छ कि तपाईं ती कुनै राम्रो-साथ हातहरु मान्छे मध्ये एक होइन - र तपाईंको लिङ्क प्रोफाइल सबै सही बनाइयो. केहि निम्न चरणहरु को लागी केहि ठाँउ को लागि केहि मिनेट को लागी अधिक नहीं होने को संभावना हो, तपाईंको एसईओ को बेहतर बनाउन को लागि उनको विशाल क्षमता कभी कम. त्यसैले, तलका वेबसाइटहरूका लागि ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्ने मेरा शीर्ष विशेष विशेषताहरू छन् - स्वाभाविक, कुशलतापूर्वक र निश्चित रूपमा पैसा कमाई.
गुणस्तर सामग्री प्राप्त गर्नुहोस् जुन मूल्य उद्धार गर्दछ
जाहिर छ, वास्तविक मूल्यको साथ एक अद्वितीय, गुणस्तर र नि: शुल्क जानकारीको साथ अधिक लाइभ आगन्तुकहरुलाई आकर्षित गर्न सम्भवतः वेबसाइट व्यवस्थित रुपमा ब्याकलिङ्क सिर्जना गर्ने उत्तम तरिका हो, र बिना रैंकिंग दण्ड कमाउने जोखिम. तपाईलाई आवश्यक छ एक सम्मिश्र पृष्ठ सामग्री (ठोस लेख, केस अध्ययन, आदि प्रदान गर्नका लागि. ) अधिक मानिसहरू लाई यसलाई साझा गर्न, यसको लिङ्क गर्नुहोस्, र यो वेबमा अन्यथा उल्लेख गर्नुहोस्. त्यस तरिका, तपाईंको सादा पाठ लेखन को भाग लाई केहि स्वीकार्य र आँखा-कोचिंग, जस्तै उपयोगी infographics, स्प्रिेडशीट, संक्षिप्त मामला अध्ययन, चार्ट, आदि मा एक भाग को बारे मा विचार गर्नुहोस।.
प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा बाहिर
बनाउनुहोस्, तपाईंको आला प्रतिस्पर्धाहरूमा समय व्यतीत गर्नका लागि समयमा उनीहरूको सफल अनुभवको बारे थप सिक्न जाँदा केहि गलत छैन। तपाईंको थप प्रयासहरू सम्भव तरिकामा सम्भव तरिकालाई राम्रो तुरुन्तै निर्माण गर्न. खुला लोकप्रियमा उपलब्ध ब्याकलिङ्क अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि ती लोकप्रिय अनलाइन उपकरणहरू मध्ये एक प्रयोग गर्न संकोच नगर्नुहोस्. मेरो लागि, मैले बहुमूल्य प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी प्राप्त गर्न निम्न ढाँचाहरू फेला पार्न खोजे - मोज ओपन साइट एक्सप्लोरर (मोज), सेमील्ट विश्लेषक (सेल्टल्ट), चिन्ताजनक मालो एसईओ स्पाइडर. सबै कुराले राम्ररी राम्रो काम गर्न सक्छ. वेबसाइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न वा तपाईंको आफ्नै ब्लग बनाउनका लागि ती पहिले नै अन्वेषण गरिएका मार्गहरू मात्र उच्चतम पेजरङ्क र अधिकार स्रोतहरूमा विचार गर्नुहोस्.
गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न एक ठोस सामग्री लिएर स्वाभाविक रूपमा र आफ्नो आला प्रतिद्वंद्वीहरू प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो आफ्नै लाभको लागि आफ्नो उत्कृष्ट जीत को दोहोर्याउन - अझै सम्म अझ राम्रो हुनेछ. त्यसोभए, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि केवल ब्याकलिंकहरू निर्माणको लागि न केवल कठोर काम गरिरहनुहोस्, तर तपाईंको बलियो अधिकार र सार्वजनिक जागरूकताको लागि. तपाईंको ब्लगमा शीर्ष प्रभावकारिता साक्षात्कार विचार गर्नुहोस्, लोकप्रिय ब्लग पोष्टहरू र लेखहरूको माध्यमबाट तपाइँका उत्कृष्ट कृतिहरू विस्तार गरी लोकप्रिय सोशल मिडियामा व्यापक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न, साथै साथै स्मार्ट र अन्तरदृष्टित्मक टिप्पणीहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा ती योग्य ब्याकलिङ्कहरूको आनन्द लिनका लागि विचार गर्नुहोस्। Source .